Saraakiil Maraykan Ah Oo Lagu Eedeeyey In Ay Dajeen Qorshe lagu Shiqoolaayo Trump – Heemaal News Network
Ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Rod Rosenstein ayaa dafiray wararka sheegayay in uu qorsheeyay in iyadoo dastuurka wadanka loo marayo in xilka laga qaado madaxweyne Donald Trump.
Mr. Rod ayaa sheegay in eedeymahan ay yihiin kuwo aan sax aheyd isla markaana la malo awaalay.
Jariiradda New Yorka Times, ayaa ila aan la carabaabin ka soo xigatay in Mr. Rod uu soo jeediyay in Madaxweyne Trump waxyaabo sir ah laga duubo si loogu eedeeyo in uu qas iyo jahweer badan geliyay Aqalka Cad.
Isagoo ka jawaabayay warbixinta ay daabacday Jariiradda ayuu sheegay in warkan uu sax aheyd.
” Ma rabo warar intaas ka badan in aan ka iraahdo arrintan maadaama isha laga heley warkan aan la sheegin wayna iska caddahay in uu yahay been abuur ka dhan ah waaxda, waxay doonayaan in ay danahooda gaarka ah muujiyaan,” ayuu yiri Mr Rod.
Xeer ilaaliye ku xigeenka Mareykanka ayaa kal hore ka hadlay markii madaxweyne Trump uu ceriyay agaasimihii hey’adda amniga gudaha Mareykanka ee FBI sanadkii tagay.
Mr Trump ayaa kulan fiidnimadii jimcaha ka dhacay magaalada Missouri ee dalka Mareykanka ka sheegay in uu maqlay in waaxda cadaaladda ay qorsheynayso in ay shirqoolaan.
Waxaa uu sheegay in maamulkiisa xoreeyay isla markaana iloobay in kuwa xun xun ka xoreeyo hey’adda FBI.
Dawlada Fadaraalka: Waxaa Jira Qorshe Uu Muuse Biixi Ku Imanayo Muqdisho, Farmaajo-na Hargaysa
Trump iyo Putin Oo Shir Uga Bilowday Magaalada Helsinki.
Madaxweynaha Maraykanka Trump iyo Ruushka Putin ayaa ku kulmay magaalo madaxda dalka Finland ee Helsinki iyagoo ka wadahadalaya arrimo ay ka mid yihiin Milatariga iyo Ganacsiga. Madaxweynaha Ruushka Putin ayaa bilowgii shirweynahan waxa uu u […]
Daawo Ciidamada Booliiska Maraykanka Oo si Axmaqnimo ah U Garaacayay Gabadh yar Oo 14 Jir ah.
Huteelka Uu Ka Dhacayo Kulanka Madxda Maraykanka Iyo Kuuriyadda Waqooyi Oo La Cayimay
Kulanka sida wayn loo wada sugayo ee lagu wado in uu dhex maro madaxwayne Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa ka dhici doona jasiirada Sentosa,waxaa sidaasi xaqiijiyay aqalka cad. Xoghayaha saxaafada ee aqalka […]